रजनीले रचेको संसार | SouryaOnline
रजनीले रचेको संसार
सौर्य अनलाइन २०६९ चैत १७ गते ५:४६ मा प्रकाशित
‘प्रिये, यतिखेर हामी कहाँ छौँ ?’ रजनीले आफ्ना आँखा चारैतिर डुलाउँदै सोधी ।
‘बगैँचामा छौँ, प्रिये’ प्रकाशले शान्त हुँदै भन्यो ।
‘म तिम्रो काखमा लामै समय निदाएँ क्यार,’ आँखा मिच्दै उसले गुनासो गरी, ‘मलाई किन नजगाएको ?’
‘जगाउनुपर्ने आवश्यकता परेन, त्यसैले ।’
‘तिम्रो आवश्यकता के हो मैले आजसम्म बुझ्न सकिनँ । भैरहोस् । अनि यो विशाल वृक्षको नामचाहिँ के हो नि ?’ रजनीका आँखा यतिखेर वृक्षका विशाल शाखाहरूतिर दौडिँदै थिए ।
‘यसलाई कल्पवृक्ष भनेर बुझ ।’
‘गर्मीमा शीतल, जाडोमा न्यानो । कस्तो मज्जा हगि ? मलाई त कस्तो लागिरहेको छ भने मानौँ यो कैलाश पर्वत हो, तिमी देवताहरूका पनि देवता महादेव हौ र म हिमालयकी छोरी हुँ । हामी यहाँ यसरी आनन्दले बसेको जुगजुग बितिसकेको छ’ रजनीले प्रकाशका आँखामा आँखा मिलाउँदै भनी ।
‘हो त । तिमीले जे जे भन्यौ त्यही कुरा सत्य हो । म महादेव हुँ, तिमी हिमालयकी छोरी हौ † उस्तै जिद्दी गरिरहनुपर्ने स्वभावकी । यो संसार हामीले सृष्टि गरेको हो । अनि, हामी यहाँ बसेको पनि जुगौँ भइसकेको छ । बस्, हामी समयको हिसाब गर्दैनौँ । साँची, यतिका समय भइसक्यो, तिमीलाई भोक लागेको छैन ?’
‘छ त ।’ रजनीले लाडिँदै भनी ।
‘के खान मन छ ?’
‘फापरको रोटी, पुदिनाको चट्नी अनि बदाम र दूधको सर्वत ।’
तत्क्षण रजनीले चाहेको नास्ता तयार भएर थालभरी आइसकेको थियो ।
‘ल खाऊ ।’ प्रकाशले रोटीको एक टुक्रा चट्नीसँगै खाँदै भन्यो ।
‘आबुई । यति छिट्टै कसले यो सबै खानेकुरा ल्याइदियो ?’ रजनीलाई विश्वासै भइरहेको थिएन ।
‘कल्पवृक्षमुनि जे चिताए पनि पुग्छ, त्यति पनि थाहा थिएन ?’ प्रकाशले रजनीको अज्ञानता औँल्याइदियो ।
रजनी ठुस्किई । प्रकाशको यो बानी उसलाई कत्ति मन पर्दैन । एक निमेष भर उसले यस्तो चिताई मानौँ प्रकाश त्यहीँको त्यहीँ गाएब होस् ।
र, भइदियो पनि त्यस्तै । प्रकाश गाएब । रजनी झस्किई । कल्पवृक्षमुनि जे चिताए पनि पुग्ने थियो । उसलाई आफ्नो गल्ती महसुस भयो । ‘कस्तो मूर्खता मेरो’ रजनीले लामो सास तान्दै भनी । ऊ दु:खी भएकी थिई । आफूले भर्खरै गरेको मूर्खताको चेतनाभन्दा दुखद अर्थोक केही हुँदैन ।
रजनीले आफ्नो गल्ती सुधार्ने मौका अझै थियो । ऊ शान्त हुन सक्थी र प्रकाश आफुसामु प्रकट भइदेओस् भनेर चिताउन सक्थी । ऊ कल्पवृक्षकै छहारीमा थिई । उसले चिताएको पुग्ने थियो । तर, त्यसबखत उसको इगो उसका सामु फँडा फैलाएर खडा थियो । उसलाई वास्तविकता धुमिल लागिरहेको थियो । सबै कुराप्रति अविश्वास पैदा भएको थियो । मध्यदिनमा उसले सर्वत्र अँध्यारो देख्न थालेकी थिई । यद्यपि उसको मनमा आशाको दियो निभिसकेको थिएन ।
कहाँ जाला र ऊ, सायद ऊ आफैँ आउनेछ मलाई खोज्दै, आएन भने पनि मैले उसलाई फेला पारिहाल्छु । विचारहरू उसको मनमा तरंगिँदै थिए । उसका आँखा बगैँचामा परपरसम्म पुग्नथाले । प्रकाश यतैकतै छ कि ।
रजनीले पूरै बगैँचा चाहारी । प्रकाशको अत्तोपत्तो थिएन । बगैँचामा रंगीबिरंगी फूलहरू फुलिरहेका थिए । तर, रजनीलाई ती फूलको सौन्दर्य र सुवासले छोइरहेको थिएन । भ्रमरहरूको भुनभुनले त उसलाई झन् अशान्ति महसुस भयो । ऊ झन् आजित भई ।
मगमग फुल्यो फूल यहाँ गैरी बिसाउने
भमराले लग्यो रस कोही छौ कि रिसाउने ।
कोही प्रेमी आफ्नी प्रेमिकासँग गीत गाउँदै थियो । रजनीलाई गीतका मधुर शब्दहरू कर्णकटु सुनिए । उसको अविश्वास झन् सघन हुँदै थियो । अब उसलाई आफ्नै अस्तित्वप्रति आशंका बढ्न थालेको थियो । नजानिँदो डर, आशंका र आतंकले ऊ भित्रभित्रै प्रताडित हुन थाली । ऊ हतारहतार बगैँचाबाट बाहिरिई ।
बाहिर उही चिरपरिचित सहर ।
ऊ साझ नपर्दै आफ्नो कोठामा पुगी । डोरम्याट मुन्तिरबाट साँचो झिकी र खिया लागेको ताल्चामा छिराई । बडो मुस्किलले ताल्चा उग्घ्रियो । भित्र पसेर हेरी । चारैतिर माकुराको जालो । भुइँ, टेबुल, दराज र बिछ्यौनामा जमेको धूलो । र, पूरै कोठाभरि फैलिएको एकतमासको ढुसीको गन्ध । उसको मुटु भक्कानिएर आयो । एकाध घन्टा पहिला ऊ प्रकाशसँग कल्पवृक्ष मुन्तिर थिई । त्यो बगैँचा, त्यो मौसम, त्यो आनन्द ।
जतिजति सम्झ्यो उतिउति रजनीको मन बाउँडिन थाल्थ्यो । उसको दु:खको सीमा थिएन ।
यद्यपि ऊ आत्मबल भएकी स्त्री थिई । सबै कुरा बितेर जान्छ । पहिला सुख थियो । सुख बितेर गयो । अहिले दु:ख छ । यो पनि बितेर जानेछ । उसले हिम्मत बाँधी । जुरुक्क उठी, एउटा मुखौटौ लगाई र कोठा सफा गर्न थाली । केही समयभित्रै कोठा पहिलाजस्तै टकटकाउँदो भइसकेको थियो । फोहोरको नामोनिसान थिएन, फूलदानीहरू तरोताजा भएका थिए र उसले भर्खरै छर्केको अत्तरको मधुरो बास्ना उडिरहेको थियो । ऊ शवासनमा पल्टिई ।
शवासनले उसको तनमा स्फुर्ती र मनमा ऊर्जा भरियो । हठात् उसलाई पहिलाजस्तै पुराना डायरी पल्टाएर हेर्न मन लाग्यो । तर, हातहरू अनायासै रोकिए । विगतका स्मृतिहरू उग्राउनुको के सार ? उसलाई एक—एक कुराहरू सम्झना छन् । कसलाई हुँदैनन् ?
बाल्यकालमा आमाले दूध छुटाउन स्तनमा तितेपाती दलेर मुखै तीतो बनाइदिएको, बासी भात खान भाइसँग झगडा गरेको, बाबाले अकारण भित्तामा टाउको ठोक्काइदिँदा रगतैरगत भएको, पहिलो दिन स्कुलमा जाँदा बाटोमा लडेको, साथीले आफ्नोभन्दा अधिक नम्बर ल्याउँदा दिनभरी रोएको, होलीको दिनमा केटाहरूले पिच्कारी हानेर शरीर निथ्रुक्क भिजाइदिएको, पहिलो प्रेमको मधुर अनुभूति, पहिलो समागमको कौतुहल, कलेजका सुरुआती दिनहरू, जागिर खोज्दाको रामकहानी, दोस्रो, तेस्रो …प्रेमको सिलसिला र अन्त्यमा विवाहको नाटक ।
जिन्दगी एक खेल हो, नथाकिन्जेल खेल्दै जानू
जिन्दगी एक दृश्य हो, नअघाइन्जेल हेर्दै जानू
थाकिसकेपछि रित्तो छ जीवन, अघाइसकेपछि खोक्रो छ जीवन ।
डायरीको अन्तिम पानामा यिनै हरफहरू त छन् । उसलाई डायरीका हरेक पन्ना, सायरीका हरेक पदावली याद छन् । डायरी पल्टाउनुको कुनै सार छैन । ‘म आपैँm एक जीवन्त डायरी हुँ’ रजनीले मनमनै भनी ।
उसलाई कल्पवृक्षको याद आयो । प्रकाशको मेघजस्तै सघन बोली, उसको काखमा बस्दाको न्यानो अनुभूति, त्यो अकल्पनीय माहोल । त्यो प्रेम, त्यो सान्त्वना, त्यो समरसता केवल सपना थियो त ? म फेरि त्यो बगैँचा खोज्दै जान सक्छु त ? कसरी अचानक म त्यहाँबाट बाहिरिएँ ? के मेरो मनमा पलाएको क्षणिक अहंकारले मेरो सुन्दर संसार भत्काइदिएको थियो ?
भर्खर जस्तो लाग्ने त्यो दृश्य । अघिसम्म ऊ महादेव थियो म हिमालयकी छोरी । हामी सृष्टिकर्ता थियौँ । यो संसार रचेर यहाँ भइरहेको लीला हेर्दै रमाउँदै थियौँ । अहिले भने म एक दु:खी पात्रको भूमिकामा पछारिएकी छु । प्रकाश म भुटभुटिएको हेर्दै मुस्कुराउँदै होला । ऊफ् †
‘मलाई यही भूमिका पुन: दोहोर्‍याउन कुनै आपत्ति छैन । यद्यपि एकपटक त्यो अप्रतीम जीवनको झलक पाइसकेपछि, त्यो शान्ति र आनन्दको स्वाद अनुभूति गरिसकेपछि, त्यो दिव्य जीवनको बाटो पहिल्याइसकेपछि मलाई यो नाटक खेल्न मन छैन । मैले त्यही दिव्य जीवनलाई पछ्याउनुपर्छ,’ रजनी भुतभुताई ।
उसले संसारका गतिविधिमा रस लिन वा आसक्त हुन छोडिदिई । इन्द्रियहरूमा सल्बलाउने वासनाका आँधीहरूलाई साक्षी भावले पन्छाउँदै गई । उसँग दिव्य जीवनको सूत्र थियो, ज्ञानचित्त हुँदा रागचित्त छैन, रागचित्त हुँदा ज्ञानचित्त छैन । एकसमय च उभयोऽनवधारणम् । ऊ शान्त हुँदै गई, उसको मनमा प्रज्ञा जाग्यो, संसारका सबै घटना—परिघटना अस्थाइ हुन् र समयसँगै बितेर जान्छन् । दिनसँगै रात पनि आउँछ, सुखसँगै दु:ख पनि आउँछ । यो प्रकृतिको नियम नै हो । आशंका, डर र अहंकार बन्धन हुन्, प्रेम, लयात्मकता र समरसता मुक्ति ।
यो प्रज्ञोदयसँगै रजनी फेरि आनन्दलोकमा पुगेकी थिई । त्यही कल्पवृक्ष त थिएन, प्रकाश पनि थिएन यद्यपि ऊ स्वयं आफ्नो जीवनको वास्तविकताको स्रष्टा बनेकी थिई । उसलाई यस्तो लागिरहेथ्यो मानौँ ऊ अहिले जहाँ छे त्यहाँ सन्तुष्ट छे । कल्पवृक्ष, प्रकाश वा आनन्द त उसकै मनको शान्ति, प्रज्ञा र प्रेमले सिर्जना गरेका थिए । ‘शान्ति, प्रज्ञा र प्रेमले म हजारौँ कल्पवृक्ष, प्रकाश र आनन्द सिर्जना गर्न सक्छु,’ रजनीको खुसीको सीमा थिएन ।